Witkoppen Clinic: Papa Ayaresabea Ma Obiara | Akan kasahorow
Wukuda. Ɔbɛsɛ da 28, afe 2020
Jozi, Yawda. Ɛbɔ da 10, afe 2020 - Wukuda. Ɔbɛsɛ da 21, afe 2020. 𓀠 111
Adɛn?: Ayaresabea no boa yareɛ nkorɔfo firi Diepkloof, Kyasands na Lion Parks.
#adwene-gyinae #wɔ #si #ayaresabea #din #hemfa #Johannesburg #mberebɛn #1946 #woana #abiasa #nɛɛseni #manegya #dɔktanyi #Jean #Bassett #adɛn #boa #yareɛ #nkorɔfo #yɛ #nsɔhwɛ #sa ... yare #koankorɔ #yareba #adwene mu #ɛho mmuaeɛ #hu #8500 #biara #bosoome #panyin #tua #ba #dadaw #dɛmdie #hwee #2010 #nyiano #mamforanyi #obi a ɔnnyɛ edwuma #saa ara #akatua